अब लापरवाहीले बिरामीको ज्यान गए डाक्टरलाई जन्म कैद हुनसक्ने ! – MEDIA DARPAN
अब लापरवाहीले बिरामीको ज्यान गए डाक्टरलाई जन्म कैद हुनसक्ने !
मिडिया दर्पण	 पछिल्लो अपडेट Oct 6, 2018
काठमाडौं । यसअघि लापरवाहीका कारण उपचाररत बिरामीको मृत्यु भएका खबर आइरहने गर्थे । तर, ती डाक्टरलाई खासै कानूनी प्रक्रिया पुराउने झण्झट हुँदैनथ्यो । बरु, अस्पतालले मृत्यु हुनेका आफन्तलाई क्षतिपूर्ति तिर्थ्यो । कुरा समझदारीमा मिलाइन्थ्यो ।
अब भने लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भए डाक्टरले पाँच वर्ष जेलदेखि जन्म कैद हुनसक्ने ऐन बनेको छ । भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी मुलुकी ऐन संहितामा यस्तो नियम ल्याइएको हो ।
पार्टी एकतापछि प्रचण्डको पहिलो भारत र चीन भ्रमण !
नेकपाले ताेक्याे केन्द्रीय कार्यालय रहने स्थान